ओलीले भित्तामै पुर्‍याउन खोजे, अब माधव र प्रचण्डले के गर्लान् ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
ओलीले भित्तामै पुर्‍याउन खोजे, अब माधव र प्रचण्डले के गर्लान् ?
२०७७ आश्विन ३०, शुक्रबार १८:१८:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी, सरकार र राज्यका अरु स्वतन्त्र निकायमा पनि प्राधिकार जमाएको कसैलाई मन परेको छैन । पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपाल मात्रै होइन, ओलीप्रति असन्तुष्टि नभएको व्यक्ति नै देशभित्र फेला पार्न मुस्किल पर्ला ।
ओलीले प्राधिकार जमाएकै कारण असन्तुष्ट समूह धेरै ठूलो नहोला ।
यो ठूलो राजनीतिक विषय भए पनि ठूलो जनचासोको विषय होइन । अहिले जनसमुदायले जुन बाटोबाट जस्तोसुकै शासक आए पनि जनतालाई सुख दिने भए पुग्छ भन्ने मनोविज्ञान पालेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार व्याप्त छ । शासकलाई भुइँफुट्टा र बिचौलियाले घेरेका छन् । जनता महामारीले आक्रान्त छन् । अस्पताल गयो, शय्या छैन । औषधी र उपचार पाउने कुरा त निकै टाढाको भयो । महामारीका कारण भएको रोजगारी पनि गुम्दै छ । रोजीरोटी प्राप्त हुने सम्भावना सबैतिरबाट साँघुरिँदै छन् ।
यस्तो बेला जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो छैन । राज्यको क्षमता कति हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तैपनि, जनताको मनमा राँको बलिहहेको छ । किनभने, यतिखेर अभिभावकीय भूमिका राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्वाह होस् भन्ने जनताले चाहेका छन् । भएको स्रोत, साधन र अवसरमा नेता र तिनका आसेपासेले मात्र एकलौटी नगरुन् भन्ने मात्र उनीहरुको आग्रह छ ।
करका नाममा गरी खाने वर्गलाई राज्यले लुट्ने अनि आफन्त र निकटस्थलाई पोस्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो भने त्यो जनतालाई चाहिएको छैन । यसबाट आजित र आक्रान्त भइसकेका छन् जनता ।
भ्रष्टाचारका प्रकरण नांगो रुपमा बाहिर आइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्ना पूर्व र उत्तर गरी अरु भएभरका प्रधानमन्त्रीहरुमाथि एउटै परियोजना, त्यो पनि बन्नै सुरु नभएको, मा ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदा त्यसको तथ्ययुक्त छानबिन गर्ने नैतिक धरातल यस मुलुकका कुनै निकायसँग छैन । ढुकुटी रित्तिँदै छ । जनता कर तिर्ने सामथ्र्य गुमाउँदै छन् । तर नेताहरुको सुविधा बढ्दै छ । स्थानीय तहदेखि संघसम्म, कार्यकारीदेखि संवैधानिक अंगसम्म जताजतै मनपरि भर्ती र सेवा सुविधा बढाउने होड छ ।
बाटो नै नपुगेका ठाउँमा गाडी किन्ने होड छ । गाडी नै नभएका ठाउँमा तेलको खोलो बग्छ । उही कार्यालयले नयाँ गाडी किन्न र पुराना गाडी मर्मत गर्न उस्तै रकम खर्च गर्छ । लूटको धन, फपूको श्राद्धजस्तो गरिँदा कुन नेपालीको मन नपोल्दो हो ?
तर, आमनेपाली नागरिकको मन जुन कुराले पोलेको छ, त्यो कुराले सत्तारुढ दलका कुनै पनि प्रभावशाली नेताहरुको मन पोलेको छैन । उनीहरुमध्ये कतिपयको मन त पोलेको छ तर केवल त्यस लूटको हिस्सेदार बन्न पाइएन भनेर ।
हिस्सेदार बने पनि आफ्नो पक्षमा ठूलो हिस्सा परेन भनेर तड्पिएका छन् कतिपय । कतिपय भातभान्सा नै आफूले चलाउन पाए ठूलो हिस्सा पथ्र्यो कि भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।
यिनैमध्येमा पर्छन्, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरु । नभए किन उनीहरु एक थान मन्त्री वा एकाध थान संवैधानिक निकायको पदाधिकारीका निम्ति मरिहत्ते गर्छन् ? किन उनीहरु सुशासनको एजेन्डा उठाउँदैनन् ?
किन उनीहरु रोकिएका विकासका कामको गति दिन जोडबल गर्दैनन् ? किन उनीहरु किसानले मल नपाउँदा एक शब्द बोल्दैनन् ? किन उनीहरु तिनै डिफल्टरको घरमा वास बस्छन्, जसले १३ अर्बको मलको ठेक्का लिएर किसानलाई धरधरी रुवाउँछन् ? अनि यिनैले सुशासन दिन्छन् वा ओलीसँग जुधेर देशको अवस्था फेर्छन् भन्ने आस कसले गर्ने ?
हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको टिमको आलोचनाका लागि प्रशस्त मुद्दा छन् । तिनका हरेक निर्णय र व्यवहार खेदजनक छन् । सन्तोष गर्ने कुनै ठाउँ छैन । तर, उनकै पार्टीभित्रबाट जसले ओलीको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरुसँग नैतिक धरातल छैन ।
एक त उनीहरु आफू पटकपटक जनताको नजरमा परीक्षित भइसकेका छन् र कसैले पनि आशाको दीयो जगाउन सकेका छैनन् । अर्को, उनीहरुले जनसरोकारको मुद्दा उठाएकै छैनन् । उनीहरुले केवल आफ्नो निजी गनगन जनतालाई सुनाइरहेका छन् । आफूले नपाएको भडास जनतालाई देखाएर पोखिरहेका छन् । जनताले भोगेका समस्या, अभाव र अप्ठेरालाई उनीहरुले राजनीतिक पुँजीकरण गर्न सकेका छैनन् । किनभने, उनीहरुको प्राथमिकता यो होइन ।
माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले चाहेमा ओलीलाई एक डेग अगाडि चल्न नसक्ने गरी गलाउन सक्छन् । यो तागत उनीहरुमा नभएको होइन । तर, नैतिक बल नभएपछि कसको के लाग्छ ? उनीहरुको यही कमजोरीमा टेकेर ओलीले काठे कोलजसरी मज्जाले रिंगाइरहेका छन् । उनीहरुको लोभको भकारीबारे भलिभाँती जानकार ओलीले पालैपालो विभिन्न पद र अवसरको गँड्यौला उनेर बल्छी फालिदिन्छन् ।
अनि पालैपालो वामदेव गौतमदेखि प्रचण्डहरु बल्छीमा परिरहन्छन् । अहिलेसम्म भएको यही हो ।
यदि ओलीको प्राधिकार अन्त्य गर्ने हो भने एकाध मन्त्रीका निम्ति हात पसार्ने होइन । केही थान संवैधानिक नियुक्तिका निम्त दिनदिनै बालुवाटारको आँगनमा ढुक्न जाने होइन । कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी धुम्बाराहीमा बैठक बसरी जनसरोकार मुद्दामा छलफल गर्नुपर्छ ।
स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारी सरकारलाई पूरा गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । निश्चित समय सीमाभित्र तोकेका लक्ष्य पूरा गरिएन भने पार्टीको विधिअनुसारै सरकारमा रहनेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।
ओलीले कसलाई मन्त्री बनाए वा कसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिए भन्ने कुरा जनताले पनि हिसाबकिताब राखिरहेका हुनेछन् । गैरकानुनी क्रियाकलाप अदालतबाट पनि उल्टिन सक्छन् । तर राजनीतिक रुपमै दिशानिर्देश गलत भयो भने पार्टीबाट मात्र सच्चिन सक्छ ।
त्यसकारण पनि केही पद वा राज्यको स्रोतसाधनमा लोभ नगरी माधव र प्रचण्डले केही समय धैर्य गर्नुपर्छ । पार्टी कार्यालयमा नियमित छलफल र भेला गर्नुपर्छ । पार्टी कार्यालयबाट निश्रित निष्कर्षका आधारमा सरकारमा रहनेहरुको हिसाबकिताब राख्नुपर्छ । आफूहरुले पटकपटक अवसर पाइसकेको र जनताबाट पनि परीक्षित भइसकेको भन्दै कुनै राजकीय पदका लागि ¥याल नकाढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर तामाङ लगायत युवा पिँढीलाई अगाडि सारेर पार्टीभित्र पुनर्ताजगीकरण र पुनःजागरण ल्याउन सक्नुपर्छ ।
होइन भने ओलीले जस्तासुकै स्वेच्छाचारी कदम चाले पनि, जस्तासुकै अनैतिक र अपारदर्शी हर्कत गरे पनि अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेकै भरमा आमजनताले पत्याउने छैनन् । आमनागरिकको साथ नपाइकन पार्टीभित्र यी दुई नेताको छटपटाहटले तत्काल कुनै नतिजा निक्लिने छैन । ओलीले भित्तामा पुर्याएर छाड्ने छन् ।
(अघिल्लो शृंखला पढ्नुहोस्-
वारपारको मुडमा ओली, के गर्लान् माधव र प्रचण्ड ?